सधैँ हेपिइन् थममाया : सचिवालय बाटो छेक्ने, प्रधानमन्त्रीले काम नदेख्ने
जनतापाटी डेस्क शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रीले सपथ खाएकै दिन काम चाहियो भनेर नयाँ पुराना सबैको घाटीमा ‘परिणाम’को तरवार झुण्ड्याइदिएका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछि विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा भन्दा परिणाममुखी काम चाहियो, ‘एक मिनेट पनि दायाँबायाँ हुनुहुँदैन’ भनेका हुन् ।
उनले ट्याक्क ट्याक्क बुँदामै भने,
–चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा जसरी काम भएको थियो त्यसरी नै काम गर्नुस्,
–नयाँले चार दिनभित्र कार्ययोजना र पुरानाले प्रगति विवरण ल्याउनुस्,
–फागुनपछि काठमाडौंका सडकमा खाल्डा देखिनु भएन,
–लोभ गरे अथवा मिलाई–मिलाई आम्दानी गर्नेलाई छोडिन्न, सीधै कारबाही हुन्छ,,
प्रधानमन्त्रीले यसरी काम अह्राउनुअघि नयाँ मन्त्रीले आश्वासन छर्ने र प्रतिवद्धता फ्याँक्ने कर्मकाण्ड पूरा गरिसकेका थिए । कसैले सहमतिसाथ अघि बढ्ने, कसैले लोभ र डरबाट प्रभावित नभई काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कसैले त दीर्घकालीन योजना पूरा गर्दै एक नम्बर मन्त्रालय बनाउने उदघोष नै गरे । यो सुन्दा लाग्छ, अब रातारात नेपालको कायापलट हुन्छ । बढ्दो बेरोजगारी र बढ्दो विदेश पलायनबारे बोल्दै नयाँ श्रममन्त्रीले त स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा गरे । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्य चाँहि बन्द गर्दिन भने, उनले । बरु, सरल र सहज बनाउँछु, भने ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले त सडक, रेल, पानीजहाजको कुरा निकालिहाले । उनले यसका लागि प्रशासनिक र नीतिगत सुधार गर्ने कार्यलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाए । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा आएका (न महिला न ज्येष्ठ नागरिक) नयाँ मन्त्रीले त निवर्तमानमन्त्री मेरो दिदी हुनुहुन्छ । केही समस्या आयो भने उहाँसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु, भने । उनले, ‘म टिममा विश्वास गर्छु । विश्वासघात भयो भने अर्को परिणाम आउन सक्छ’ भने ।
नयाँ मन्त्रीले यसो भनिरहँदा यही मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थममाया थापालाई चाँहि विश्वासघात वा धोका भएन होला ? बाहिरिनासाथ थापाले आफुले झेलेको दुःख पोखेकी छन् भने आफुलाई हटाइएकोबारे अनविज्ञ रहेको सुनाएकी छन् । उनले यतिसम्म गुनासो गरिन्, ‘मन्त्री भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भयो, सचिवालयले घेरेर राख्यो । अहिले आएर आफैँलाई हटाइँदैछ भन्ने थाहा पाइन ।’ यस्तै गतिविधि गरेको थाहा पाएर हो वा अरु कुनै कारणले मन्त्री फेर्नु अघि प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा पनि कैँची चलाएका थिए । ‘म आफै बर्खास्तगीमा पर्छु भन्ने सोचेकी थिइनँ, उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘म यसमा बिल्कुल अनभिज्ञ छु । मलाई किन मन्त्रीबाट हटाइयो ? केही मेसो पाएकी छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले काम खोज्दा, तपाईंले सुधारको प्रयास गर्नुभएन रे नि त ? जवाफमा जनतापाटीसँग उनले भनिन्, ‘खास भन्ने हो भने यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले छलफल गर्ने मौका मिलेन । उहाँसँग भेट हुने वातावरण नै सहज थिएन । उहाँको सचिवालयले हामीलाई भेटाउन आवश्यक ठानेन । मन्त्री भइसकेपछि कतिपय विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ । तर, सचिवालयले यो गम्भीरतालाई बुझेको जस्तो अनुभव नै गर्न पाइनँ ।’
एक पटक होइन, पटक–पटक समय मिलाएर बोलाउँछु भनियो तर, बोलाइएन, उनले अगाडि थपिन्, ‘कहिलेकाँही चाँहि उहाँहरुले मिलाउनु भयो होला । तर, निकै गम्भीर विषयमा तुरुन्त भेट्न खोज्दा कहिल्यै समय मिलाउनु भएन ।’
काम देखाउनलाई त प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता नै पर्याप्त थियो होला नि ? किन भेट्नु पर्ने बारम्बार ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘त्यो सम्झौता सबै मन्त्रीसँग गर्नु भएको हो । त्यो पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा आधारित रहेर यति समयभित्र यो गरिसक्ने भन्ने एउटा कार्यतालिका न हो । हामी त महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकबारे काम गर्नु पर्ने जिम्मेवार मन्त्रालयका मान्छे । के बजेट मात्रै खर्च गर्ने हो र ? संविधानको मौलिक हकमा भएको सामाजिक सुरक्षाको मूल जिम्मा र कार्यान्वयन हाम्रै काधमा हो । तपाइहरुले देख्नु भयो महिला हिंसा र बालबालिकामाथिका अपराधका कयौँ गम्भीर घटनाको हामीले सामना गर्नु परेको थियो । यस्ता विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नै गर्न नपाउनु ?’ । यो त हेपाह प्रवृति भयो ।
कार्यसम्पादन सम्झौता भन्दा तेब्बर काम गरेका थियौँ
उनले कार्यसम्पादन सम्झौता अन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने अधिकांश काम पूरा गरिसकेको र केही काम मात्रै कार्यान्वयनको चरण रहेको बताइन् । तर, आफुहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा भएको भन्दा तेब्बर काम गरेको उनको जिकिर छ । के गर्नु भो त्यस्तो ? उनले भनिन्, ‘हामीले यो वर्षलाई महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको रुपमा घोषणा गरेर पाँच प्रदेशमा कार्यक्रम गरिसकेका थियौँ । बाँकि दुई प्रदेशमा पनि पुसभित्रै गरिसक्ने र त्यसपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्ने योजना थियो । जेठ १६ गतेलाई हामीले राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने घोषण यसै पल्ट गरेका हौँ । यस्ता कयौँ काम हामीले गरेका छौँ ।’ कामै गरेनन्, भन्नु र त्यसैको आधारमा मन्त्री फेर्नु कत्तिको बुद्धिमानी होला ? त्यो पनि जानकारी नै नदिएर ।
स्मरण रहोस्ः प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन एवं मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानन्त्रीसँगै सपथ खाने मन्त्री थिईन्, थममाया । पहिलो रोजाइमा परेका थिए, थापा र लालबाबु पण्डित । तर, थममायाको भनाई अनुसार, उनले कहिल्यै पहिलो रोजाइमा परेको मन्त्री हुँ भन्ने अनुभव गर्न पाइनन् । -तस्वीर फाइल